ओलीका कदममा एक पछि अर्को झुट !
माघ ४, काठमाडौं । नेकपा विवाद चुलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर ३० मा एकाएक यसअघि फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए । संवैधानिक निकायहरुमा आफुँ अनुकुल नियुक्ती गर्न नसकिरहेका बेला उनले सबैलाई झुक्याउँदै अध्यादेश जारी पनि गराए । लगत्तै सबै संवैधानिक निकायहरुका रिक्त पदमा आफुँ अनुकुल पदपुर्ती पनि गराए ।
अध्यादेश जारी गर्ने र पदपुर्ती गर्ने काम उनले सबैलाई झुक्याएर झुट शैलीका गरेका थिए । अध्यादेश प्रकरणपछि पुस १ मा बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा उनले अध्यादेश फिर्ता लिने मात्रै सहमती गरेका थिएनन् अध्यादेश जारी पछि बसेको बैठकले कुनै निर्णय नगरेको पनि स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनको सहमती अनि स्पष्टोक्तीसँगै नेकपाभित्रको असन्तुष्ट खेमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने अडानबाट पछि हटेको थियो ।
तर, अध्यादेश जारी भएको साँझ संवैधानिक परिषदको बैठकले सबै निकायका रिक्त पदमा नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले जुन निर्णयलाई लुकाएर राखेका थिए । जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दिन पुस ५ मा ओली स्वंयले सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमार्फत निर्णय सार्वजनिक गराइएको थियो
पुस ५ को बिहान ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । जुन सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
ओलीको उक्त कदमका बीच अर्को झुटको पर्दा पनि खोलिएको थियो । ओलीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसमेत रहेका संवैधानिक परिषदका सदस्य गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामार्फत संवैधानिक परिषदको बैठकले सबै रिक्त पदमा नियुक्ती गरेको खुलासा गराएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा चर्चा चुलिएको बेला तिमिल्सिनाको खुलासाले उक्त दिन सञ्चारमाध्यममा थप नयाँ कुराले तरंग फैलाएको थियो । तर, तिमिल्सिना स्वंयले भने पुस ३० को साँझ बसेको बैठकले कुनै निर्णय नगरेको त्यसअघिका मिडिया प्रतिक्रियामा बताउँदै आएका थिए ।
संसद विघटनको पृष्ठभूमी र विघटनपश्चात प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदमहरु झुट केन्द्रीत छन् । उनले झुट बोल्दै झुक्याउँदै व्यवहार गरिरहेका छन् । अहिले संवैधानिक इजलासमा बहसकै रुपमा रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा पनि उनका थुप्रै गतिविधिप्रति प्रश्न तेर्सिएका छन् । विघटन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई गरिएको सिफारिसको सक्कल नै गायब पारिएको विषय झनै रोचक छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि झुटै झुट
१. विघटनमा नै झुट
ओली स्वंयले प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने निर्णय सबैलाई झुक्याएर झुट शैलीमा गरेका थिए । उनले आफ्नै पार्टीलाई समेत गुमराहमा राखेका थिए भने अन्य निकायहरुलाई पनि झुक्याउने शैलीमा व्यवहार गरेका थिए ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन तर, ओलीले हुँदै नभएको धारा टेकेर विघटनको निर्णय गरे । भलै प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय अदालती बहसमा गएको भएपनि विघटनको सिफारिस कुनै संवैधानिक धारालाई नटेकी गरिएको कुरा अदालती बहसका क्रममा खुलासा भएको छ ।
संसद विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ लाई उल्लेख गरिएको छ । तर, धारा ७६ को उपधारा १ मा उक्त विघटनबारे बोलीएको छैन् भने उपधारा ७ मा पनि हालको अवस्थालाई नजिर बनाएर संसद विघटन गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन् । साथै धारा ८५ मा पनि विघटनको विषयमा बोलिएको नै छैन् ।
२. अदालतभित्रै झुट
संविधानका धाराहरुलाई नटेकी चालिएको उक्त कदमहरुका बारेमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेकै बेला फेरि अर्को झुटका कदमहरु चालिएका छन् । माघ २ मा बसेको संवैधानिक इजलासमा जसबारे वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए ।
अधिवक्ता श्रेष्ठको प्रश्नसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसको सक्कल कागजातबारे प्रश्न उठेको थियो । तर, अदालतबाट सक्कल गायब पारिएको भेटियो । प्रधानन्यायाधीशकै सहभागितामा सक्कल प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लगेको भेटिएको छ । जुन कानूनलाई उल्लंघन गर्ने शैली पनि हो ।
संवैधानिक इजलासमा हाल उक्त सक्कल गायबका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यद्यपी अदालतकै सहभागीतामा उक्त सक्कल लगिएको हुनाले फैसला कसरी हुन्छ पर्खनुपर्ने छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गरेको गोप्य भेटबारे पनि बहस चलिरहेको छ । संसद विघटनको विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको बेला गोप्य रुपले भेटिएको विषयले निकै प्रश्नहरु उब्जाएका छन् ।
५ पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्धारा निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी
१९ फागुन, काठमाडौं । ५ जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले…
सरकार र विप्लव समूहबीच एकैदिन दुई चरणको वार्ता सम्पन्न
१९ फागुन, काठमाडौं । सरकार र विप्लव समूह नेपाल कम्युनिष्ट…
कल्पना मुडभरीलाई आजीवन सेल सजायको फैसला
कोरोना संक्रमणबाट विदेशमा थप तीन नेपालीको निधन, निधन हुनेको संख्या ३३९ पुग्यो
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको विरोधमा विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए
सरकार निर्माणबारेको रणनीति तयार गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठक बस्दै